Let's talk about IT: Geez, what hardware spec i've got there ?
Geez, what hardware spec i've got there ?
တစ်ခါတစ်လေ Server တွေရဲ့ Hardware spec ပြန်ကြည့်ချင်တယ်၊ Serial Number ပြန်ကြည့်ချင်တယ်၊ Server ကလည်း အနားမှာမရှိဘူး ၊ ကျနော်လို့ documentation ကောင်းရင် ဘာ server သုံးခဲ့မိမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင် command line ကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အများဆုံးဖြစ်တတ်တာက ကျနော်တို့ဆို memory upgrade လုပ်ချင်တာ၊ memory type သိချင်ရုံနဲ့လည်း Data center အထိမသွားချင်၊ သွားဖြစ်လည်း ဒါလေးအတွက်နဲ့ BIOS ထဲဝင်မကြည့်ချင်ရင် အသုံးတဲ့ပါတယ်။
Linux မှာတော့ dmidecode command က တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။
Serial number လောက်ပြန်ကြည့်ချင်တာဆို
လို့ရိုက်လိုက်ရင် Chassis က serial number ကိုပြပေးပါတယ်။ Memory slot တွေနဲ့ ပတ်သက်တယ့် information က type 16 ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Slot အရေအတွက်နဲ့ Max capacity ပြပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိတပ်ထားတယ့် memory ကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ Server အဖုံးဖွင့်ကြည့်ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိ တပ်ထားတယ့် memory ရဲ့ information လောက်ပဲကြည့်ချင်ရင်တော့ 'dmidecode --type 17' ဆိုရင်ရပါတယ်။ DDR အမျိုးအစားနဲ့ speed ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
Type နံပါတ်မသေချာရင်လည်း dmidecode ရဲ့ output တစ်ခုလုံးကို output pipe နဲ့ more ဒါမှမဟုတ် less ဆိုပြီး ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်။ Output ကရှင်းပါတယ် ၊ လိုတယ့် information ကိုရှာလို့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါဆို command က ဒါမျိုးပေါ့။
Linux ရဲ့ dmidecode ကတော့ hardware info ကိုပဲ အဓိကပြပါတယ်။
Windows မှာဆိုရင်တော့ wmic ဆိုတယ့် command တစ်ခု ပါပါတယ်။ Windows Management Instrumentation ပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ့် command ပါ။ wmic command output ကရှုပ်လို့ တစ်ခါမှ လိုက်မကြည့်ဖူးပါဘူး။ လိုတာပဲမှတ်ထားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ပိုပြီး information များများ retrieve လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Serial number ကတော့ BIOS မှာရှိပါတယ် ။
> wmic bios
ဆိုရင် မျက်စိနောက်စရာ output နဲ့ပြပါတယ်။ လိုချင်တာလေးပြန် ဖြတ်ကြည့်ရတယ်။
> wmic bios get serialnumber
Memory speed ကတော့ memorychip ထဲမှာပါ။
> wmic memorychip get speed
ဒါမှမဟုတ်ပဲ တခြားဘာတွေရှိသေးလည်းကြည့်ချင်ရင် နောက်က get speed ဖြုတ်ရိုက်ပေါ့။ အဲ Memory capacity ကျတော့ memphysical ထဲမှာ ။
>wmic memphysical get maxcapacity
ဆိုရင် maximum capacity ပြပြီး ၊
>wmic memphysical get memorydevices
ဆိုရင် slot ဘယ်နခုရှိလည်း ပြပါတယ်။
WMIC က hardware info retrieve လုပ်ဖို့လောက် လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲ current system ရဲ့ info တော်တော်များများ process info တွေ ၊ partition table တွေပါကြည့်လို့ရပါတယ်။ WMIC အကြောင်းထပ်သိချင်သေးရင် ဒီ link မှာ ရှိပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ Google ကရှာပြီး Microsoft technet article သာရှာဖတ်ကြည့်ပေါ့။
အသုံးတဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ မတဲ့လည်း သုံးကြည့်ပေါ့ ။ :D
Posted by Divinity at 12:47 AM
Labels: CLI, Divinity, Hardware, Linux, System
OpenSource တွေသုံးကြည့်ရအောင် (1) ( Openfiler - Op...
Think B4 it's2La8.